Heat(1995) | MM Movie Store
ဒီကားက ၁၉၉၅ခုနှဈကထှကျခဲ့တဲ့တာဆိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှဈမှာ နထေိုငျတဲ့ခငျဗြားတို့အမွငျမှာရိုးစငျးလှနျးတယျ …ဒီဘကျခတျေအမွငျမှာ အဆငျ့မရှိလောကျဘူး ဇာတျလမျးကောငျးရငျတောငျ ကွညျ့ရတာ အံဝငျမယျမဟုတျဘူးလို့ ထငျနရေငျတော့အဲ့ဒီအမွငျကိုမွောငျးထဲလှငျ့ပဈလိုကျပါလို့ ကြှနျတျောရဲရဲကွီးပွောလိုကျမယျ….
ဒီကားက ဟီးဟီးဟားဟားကှကျတှေ အျောဂလီဆနျစရာသတျဖွတျမှုတှေ ခွောကျလှနျ့မှုတှမေပါဘူး …ဒါပမေယျ့ ပွသခြိနျ ၃နာရီနားပါးကွီးမှာ တဈခြိနျလုံးခငျဗြားဟာ စိတျလှုပျရှားနတေယျ…. ဘာလို့ဆို မတူညီတဲ့ဇာတျကောငျ ၂ယောကျရဲ့အားပွိုငျမှုကွောငျ့ပဲ….. တဈယောကျက ရဲ။
… သူ့မှတျတမျးတဈလြှောကျလုံးမှာ ဆိုးပါတယျ လိုကျဖမျးရခကျပါတယျဆိုတဲ့ လူတှကေိုမှထောငျထဲထညျ့ခဲ့တဲ့သူ. ..ရဲဌာန တဈခုလုံးကလညျး သူ့ကိုလေးစားရတယျ…..အယျ ဒါပမေယျ့ တဈနတေ့ော့ သူ့နှုတျဖြားက ဒီကောငျ အရမျးတျောတယျဆိုပွီး ညညျးညူခဲ့ရတဲ့ ဓားပွတဈယောကျပျေါလာတယျ… တကယျတော့ သူပွောတာထကျတောငျပိုပါတယျ…
အဲ့ဒီဓားပွက အကှကျခတြာတျောတယျ… ပတျဝနျးကငျြကိုလလေ့ာအကဲဖွတျပွီး တဈဒင်ျဂအတှငျးအကောငျးဆုံးသော ဆုံးဖွတျခကျြကိုခနြိုငျတယျ. ….လကျအောကျငယျသားတှကေိုကွညျ့တယျ…ဒီကားက စစခငျြး ၁၀မိနဈလောကျကတညျးက ခငျဗြားတို့အာရုံတှေ ဖမျးစားလိုကျပွီ…..
ဒီကားထဲက အဓိကသရုပျဆောငျမငျးသားကွီး (၂)လကျဖွဈတဲ့ Al Pacino နဲ့Robert De Niro ကိုတော့ အားလုံးရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမှာပါ…..အရံသရုပျဆောငျတှကေလညျး ထိပျတနျးသရုပျဆောငျတှအေတျောမြားတယျ….
ဇာတျအိမျခိုငျသလား ဒိုငျယာလော့တှလေနျးသလား သရုပျဆောငျတှလေနျးသလားဆိုတာကြှနျတျောပိုမပွောခငျြဘူး…ဒီကားဒေါငျးကွညျ့ပွီးတဲ့အခြိနျ ကြှနျတျောပွောတာမလှနျဘူးဆိုတာ ခငျဗြားတို့သဘောပေါကျသှားလိမျ့မယျ…..
ဒီကားက ၁၉၉၅ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့တာဆိုတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ နေထိုင်တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်မှာရိုးစင်းလွန်းတယ် …ဒီဘက်ခေတ်အမြင်မှာ အဆင့်မရှိလောက်ဘူး ဇာတ်လမ်းကောင်းရင်တောင် ကြည့်ရတာ အံဝင်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်နေရင်တော့အဲ့ဒီအမြင်ကိုမြောင်းထဲလွှင့်ပစ်လိုက်ပါလို့ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောလိုက်မယ်….
ဒီကားက ဟီးဟီးဟားဟားကွက်တွေ အော်ဂလီဆန်စရာသတ်ဖြတ်မှုတွေ ခြောက်လှန့်မှုတွေမပါဘူး …ဒါပေမယ့် ပြသချိန် ၃နာရီနားပါးကြီးမှာ တစ်ချိန်လုံးခင်ဗျားဟာ စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်…. ဘာလို့ဆို မတူညီတဲ့ဇာတ်ကောင် ၂ယောက်ရဲ့အားပြိုင်မှုကြောင့်ပဲ….. တစ်ယောက်က ရဲ။
… သူ့မှတ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဆိုးပါတယ် လိုက်ဖမ်းရခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကိုမှထောင်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့သူ. ..ရဲဌာန တစ်ခုလုံးကလည်း သူ့ကိုလေးစားရတယ်…..အယ် ဒါပေမယ့် တစ်နေ့တော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ဒီကောင် အရမ်းတော်တယ်ဆိုပြီး ညည်းညူခဲ့ရတဲ့ ဓားပြတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်… တကယ်တော့ သူပြောတာထက်တောင်ပိုပါတယ်…
အဲ့ဒီဓားပြက အကွက်ချတာတော်တယ်… ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာအကဲဖြတ်ပြီး တစ်ဒင်္ဂအတွင်းအကောင်းဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တယ်. ….လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုကြည့်တယ်…ဒီကားက စစချင်း ၁၀မိနစ်လောက်ကတည်းက ခင်ဗျားတို့အာရုံတွေ ဖမ်းစားလိုက်ပြီ…..
ဒီကားထဲက အဓိကသရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး (၂)လက်ဖြစ်တဲ့ Al Pacino နဲ့Robert De Niro ကိုတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ…..အရံသရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေအတော်များတယ်….
ဇာတ်အိမ်ခိုင်သလား ဒိုင်ယာလော့တွေလန်းသလား သရုပ်ဆောင်တွေလန်းသလားဆိုတာကျွန်တော်ပိုမပြောချင်ဘူး…ဒီကားဒေါင်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန် ကျွန်တော်ပြောတာမလွန်ဘူးဆိုတာ ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်…..